Waxbarashada Gaarka ah iyo ogeysiisyada ELL | BGA
Si joogto ah ayay u shaqayaan, Golaha qoysku wuxuu ka dhigayaa in kulanka loo qabto si looga wada hadlo aqoonta gaarka ah iyo barnaamijka ELL iyo barnaamijyada ardayda ee BGA. Fadlan halkaan ka aqriso, si aad u dhigto barnaamijyada Degmooyinka iyo kulamada. Qoysaska oo dhami waxay sidoo kale heli karaan qoraal maqnaansho ah oo ku saabsan kulammada, sidaa darteed waxaan hubinaynaa in macluumaadkaaga kula socodsiinayo la socodka howlaha iskuulka.
Inta lagu guda jiro xiritaanka dugsiga Covid-19, waxaan ku qor doonaa kulan gaar ah Council Qoyska on our page guriga , marka lagu daro gaarey baxay qoysaska si toos ah.
Kala xiriir Dre Woodberry taleefanka 617 635-9860 si ay su’aalo u weydiiyaan Golaha Qoyska.